Repoblikan' i Kipra - Wikipedia
Repoblikan' i Kipra
Ny Repoblikan' i Kipra na Repoblikan' i Sipra dia firenena mpikambana amin' ny Vondrona Eorôpeanina arỳ antsinananan' ny Ranomasina Mediteranea. Tamin' ny taona 1974, ny tapany avaratran' ilay nosy eo ivelan' ny tsipika maitso, lasan' i Torkia sy ataony hoe azy. Lasa repoblika hafa io amin' ny anarana hoe Repoblika Torkan' i Kipra Avaratra. Niditra tao anatin' ny faritra Euro i Kipra tamin' ny 1 Janoary 2008.
Sainan' i Kipra
Sarin-tanin' i Kipra
I Kipra no faritany tena manana harena indrindra tao anatin' ny firenena 10 niditra tao anatin'ny Vondrona Eorôpeanina tamin' ny taona 2004, ny PIB/olona iray-ny dia 18.900 €. Tamin' ny taona 2007, ny fisongan' ny toekarena dia manakaiky ny 4,4 %, ny isan' ny olona tsy miasa 2,2 %, ary ny fiakaram-bidin' ny fiainana 2,2 %. I Kipra anefa tsy ao ivelan' ny fikorontanana ara-toekarena misy eto an-tany. I Charilaos Stravrakis niteny tamin' ny taona 2007 fa ny fisongan' ny toekarena dia nidina 3,5% isa-taona.
Demôgrafian'i Kipra, mari-drefy : 100 000:1
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblikan%27_i_Kipra&oldid=1040915"
Dernière modification le 4 Desambra 2021, à 08:39
Voaova farany tamin'ny 4 Desambra 2021 amin'ny 08:39 ity pejy ity.